इटहरी वासीको टाउँको दुखाई बन्दै टेङ्ग्रा पुल ! – उज्यालो नेपाल Ujayaalo
May 15, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on इटहरी वासीको टाउँको दुखाई बन्दै टेङ्ग्रा पुल !
इटहरी/ साधुरो पुल,भाचिएको रेलिङ, सफारी र अन्य सवारीको अत्याधिक चापका कारण इटहरीको पूर्वी हाईवे अस्तब्यस्त छ । टेङ्ग्रा पुल इटहरीको लागी मात्र नभई यातायात चालकहरुको लागी समेत टाउँको दुखाईको विषय बन्दै गएको छ । पुलको विषयमा सरोकारवाला निकाय भने देखे पनि नदेखे झै गदै आएको छ ।इटहरीको मुख्य हाईवेमा रहेको टेङ्ग्रा पुलका कारण इटहरीको पूर्व लाईन अस्तब्यस्त हुन पुगेको छ । लामो समय देखि निमार्ण भएको पुल सम्पन्न नुहदा पूर्व लाईनको यातायात ब्यवस्था अस्तब्यस्त हुन पुगेको हो । पक्की पुल साँघुरोसँगै भत्कने जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । सवारी सञ्चालनमा देखिएको अवरोधमा कमि ल्याउन चार महिनाअघि सिलान्यास गरेको बैकल्पिक पैदल पक्की पुल निर्माण समेत सम्पन्न भईसकेको छैन । टेङ्ग्रा पुलमा भएको खाल्डा खुल्डी र अत्याधिक सवारी साधनको चापले पुल जिर्ण बन्दै गएको छ । पुलमा चाप कम गर्न पुलको दुवैतर्फ फुटब्रिज बनाइएपनि सवारी साधनको चाप कम नुहदा समस्या बढ्दो रहेको इटहरी ३ का स्थानीयवासी सुनिल अधिकारीले बताए । सरकारी निकायको कमजोरीको कारण दैनिक हजारौले दुःख पाईहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने सरकारी गैरजिम्मेवारीका कारण जनताले कहिले सम्म दुख पाउँने उनको प्रश्न थियो ।
पुल सागुरो भएकाले सवारी आवागमनमा निकै कठिनाई हुदै आईरहेको सर्वसाधरणले बताएका छन । वैकल्पिक उपायको रुपमा फुटब्रिज प्रयोगमा ल्याएपनि पुलको दिगो मर्मत नगरे सम्म समस्या समाधान नहुने पुलमै जाम परेको अवस्थामा पूर्व बस चलाउँदै आएका संदिप खड्काले बताए । उनले भने हामीलाई योे पुल पार गर्ने युद्ध जिते जस्तो हुन्छ । खड्काले भने यहि पुलको कारण दैनिक इटहरी चौकसम्म जाम हुने गरेको उनको भनाई छ ।
इलाका प्रहरी कार्यलय इटहरीका इन्स्पेक्टर राजन कार्कीले टेङ्ग्रा पुलका कारण इटहरी अस्तब्यस्त हुने गरेको बताए । पुलमा जाम हुदा आसपासको क्षेत्र समेत प्रभावित भएको उनको भनाई थियो । इलाका प्रहरी कार्यलय आसपास समेत पुलकै कारण समस्या आउँने गरेको उनको भनाई थियो। धुलो-धुवाले प्रहरी कार्यलयमा समेत समस्या पुगेको इन्स्पेक्टर कार्की सुनाउँछन ।
पुल निर्माण क्षेत्रको दायाँबाया रहेका खानेपानीको पाईप र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत पोल जथाभावी छ । यही बैशाखभित्रमा निर्माण गरिसक्ने गरी ७५ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का लिएकाे उक्त पुल नबन्दा सर्वसाधारण पैदल यात्रीहरुले हिडडुलमा कठिनाई भोग्नु परिरहेको छ । निमार्णको ठेक्का पाएका ठेकेदार कृष्ण खड्काले अघिल्लो वर्ष योजना परिवर्तन नगर्दा समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको कारण असार मसान्त भित्र काम सक्ने समय माग गरेको बताए । ९० प्रतिसत काम सकेको भन्दै १० प्रतिसत काम सम्पन्न गर्ने बाँकी रहेको उनको भनाई थियो ।
मौसम प्रतिकुल भएका कारण ९ सय आरोही आधारशिविरमा रोकिए